Ụbọchị My Pet » 4 Atụmatụ maka a mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 27 2020 | 3 min agụ
First ụbọchị nwere ike ịgbanwe ndụ anyị,. M na-aghọta na ọ bụrụ na ị na-ugbu a na-akwadebe maka otu, M eleghị anya nnọọ ka gị afo tụgharịa, na na m na-arịọ mgbaghara! The ụzọ kasị mma na-abanye a mbụ ụbọchị bụ iji zuru ike, otú ichefu dum na-agbanwe ndụ akụkụ. Kama, ka na-eche banyere mkparịta ụka.
Ya mere ọtụtụ ugboro, anyị na-eche na nke mbụ ụbọchị dị ka Job ajụjụ ọnụ, nke na-esetịpụrụ a ukwu ọnọdụ kpamkpam eme maka fun, na ihe ndị kasị nkịtị mmeghachi omume a ọrụ ọnụ bụ nervousness, nri? Mgbe anyị na-na-na na ụjọ, mgbe ụfọdụ anyị na-echefu ihe ndị kasị oké egwu mkparịta ụka ngwá ọrụ dị ka anyị mkpofu: na-ege ntị.
Nke a nwere ike iyi ihe dị mfe, ma ọ bụ oke itunanya ehighị nne n'ụwa taa. Anyị na-elekwasị anya nke ukwuu na-akwadebe anyị witty okwu ma ọ bụ nke zuru okè nnyefe na anyị eleghara ka n'ụzọ zuru ezu akụ na onye nke ọzọ. M nụrụ a ọtụtụ nnukwu onye-iche iche, na m hụrụ n'anya na-akpa ọchị ụmụ okorobịa, ma ihe banyere Ihọd n'ezie ndị na-ege ntị na ihe ị na-ekwu? Ọfọn, ọ bụ a nēdebe. Ọ bụrụ na ọ bụ na-akpa ọchị, na-, mgbe ahụ, ị ​​na-na na kpọrọ see jackpot.
Men chọrọ a nwaanyị onye na-ege ntị, kwa! M na-adịghị ekwu okwu banyere nanị ịnụrụ okwu ọ na-ekwu, ọ bụ ezie na bụ a dị oké egwu, nzọụkwụ mbụ. N'ezie ige ntị n'okwu ya, ya ụda, ozu ya asụsụ, na omume ya. Women agbasaghị ntị ka ihe ndị a nke ọma, ma na mbụ ụbọchị, anyị na-abụkarị ga-esi otú lekwasịrị anya anyị onwe anyị (ejiji anyị na-, anyị ntutu, nri anyị na ezé, Ònye mba, na lipstick reapplications) na anyị na-echefu ihe mere anyị na n'ezie e.
Na-ege ntị gị ụbọchị na-fọrọ na-ekwe nkwa iji nyere mkparịta ụka eruba. Bad na-ege ntị nkà, Pịnye A mmadụ? Ebe a bụ a usoro:
1. Ajụjụ: Ọ bụrụ na gị ụbọchị okwu banyere ọrụ ọrụ ma ọ bụ ọdịmma onwe na ị na-adịghị aghọta, ma ọ bụ iwu ihe kwụsịrị menu ị na mgbe nụrụ, na-eche-enweghị isi na ajụ ajụjụ. jụọ pụọ. Ndị mmadụ n'anya na-akọwa ihe ha maara ọtụtụ ihe banyere, na ị dị nnọọ tụgharịa gị ụbọchị n'ime otu ọkachamara, ma na nke ahụ bụ na ụgbọ ala engines ma ọ bụ Sushi. Onye na-adịghị chọrọ ka obi dị ka otu ọkachamara? Anyị na-agbasaghị na-ekwu ọtụtụ ihe ndị ọzọ banyere anyị agụụ mmekọahụ, N'ihi ya, ị na-amata na onye na a nwere ụzọ.
2. Kwusi: Ikwe gị ụbọchị oge rụchaa ya ma ọ bụ ya echiche mara mma ọkọlọtọ - na ike ga-egosi ike mgbe ị na-enwe obi ụtọ ma ọ bụ ụjọ - ma na-ewere ya otu nzọụkwụ gbadakwuo pụrụ n'ezie inye ozi. Otu oké ụzọ nke na-eme nke a na-ewere a inu mmiri ka onye na-gụchara a echiche. Ọ na-enye ndị mmadụ a juu jupụta, na ọtụtụ ugboro na ị mara ihe banyere ha ndị a inclusions.
3. Ọmịiko: Ma eleghị anya, ọ dị nnọọ okokụre ya n'ókè, ma ọ bụ ikekwe ọ bụ maka a nkwalite. Chee echiche otú ị ga-eche na na ọnọdụ. I nwere ike chọrọ na-ekwu banyere ọkacha mmasị gị na klas, ihe ị chọrọ ime na ubi, ma ọ bụ na oru ngo na ị na-arụ ọrụ na ịrị n'ọkwá. Ugbu a, i nwere oké ajụjụ. Nke a bụ otu oge ebe naanị ọdịmma onwe nwere ike igosi na-enye nnọọ aka na-amụ banyere onye ọzọ.
4. Megharịa: Ọ bụrụ na ị na na na otú nchegbu na ụjọ na i nwere brọkọlị araparawo ezé gị na dị nnọọ na-enweghị ike na-elekwasị anya na nkọwa nke ọrụ ya ebe mmetụta blindly maka kọmpat gị obere akpa, na nnọọ mpe-agbalị bulie na isi okwu. Ka o kwuru data ntinye? Ugbu a, i nwere ike ịjụ ajụjụ banyere ụdị data, ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe ọ hụrụ n'anya n'anya, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ na-eji uka ichekwa caffeine na-adị ndụ ya. ma n'eziokwu, echefu kọmpat mgbe ị nwere ike, na dị nnọọ ịjụ ya!
N'ezie, ajụ ajụjụ banyere gị ụbọchị si Pita(s) na-atụ aro. Ọ bụghị ihe anụ n'anya? Tulee, biko. M na-ekwu nke a na jest (na ụdị kpọrọ ihe.)
Enwe gị mbụ ụbọchị, zuo ike, na nwere fun! Dị na-echeta na-ege ntị. Ndụ gị nwere ike n'ezie mgbanwe, ma hey, ọ dịghị nrụgide.
Gịnị mere na ị ka na Single – Ga-esi Ọ